WINDOWS7ကို7မှာ RDP ကို ​​ENABLE လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
ဒါခေါ် Oka - ကပြည်တွင်းရေးငွေပေးချေမှုလူမှုကွန်ယက် Odnoklassniki ဝေမျှဖို့ကိုဆိုလိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကငွေးစက္ကူများကို virtual analogue တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါခြေချင်းနှင့်အတူ, သငျသညျတန်းမှအခြားအသုံးပြုသူများ 5+ မိတ်ဆွေဓါတ်ပုံများနှင့်ပိုပြီးများအတွက်လှပသောလက်ဆောင်တွေဝယ် Odnoklassniki တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းအတွက်လျင်မြန်စွာရွှေ့ဖို့အမျိုးမျိုးပေးဆောင်န်ဆောင်မှုများ, သင့်အကောင့်အခြေအနေနှင့် function ကိုစာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။ မူအရခုနှစ်, အရင်းအမြစ်ဟာခြေချင်းမရှိဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့နှင့်အတူ Odnoklassniki ၌သင်တို့၏ pastime ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Oki Odnoklassniki Extract
ဒီကိုငဲ့ကှကျ Oka ယူဘယ်မှာရှိသနည်း ဤမေးခွန်းကိုဖြစ်ကောင်းလူမှုကွန်ယက်၏နီးပါးတိုင်းအသစ်ကအဖွဲ့ဝင်, မိမိကိုယျကိုမေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့နှင့် paid နှစ်ဦးစလုံးပေါင်းများစွာရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
Option ကို 1: အရစ်ကျခြေချင်း
လူမှုကွန်ယက်အတန်းဖော်များ၏ developer များ Oki ဝယ်ဖို့ကိုဆက်ကပ်။ ငွေပေးချေမှုဆိပ်ကမ်း, အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးနှင့်အခြားနည်းများ, ဒီဆိုဒ်၏အပြည့်အဝဗားရှင်းအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, နှင့်မိုဘိုင်း application များဟာဘဏ်ကဒ် အသုံးပြု. ဆဲလ်ဖုန်း။ Odnoklassniki ၌သင်တို့၏ကို virtual အကောင့်ဖွင့်ဖြည့်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်အဘို့အသငျသညျအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link ကို click နှိပ်ပြီးနိုင်သည့်ဆောင်းပါး, ဖတ်ပါ။
အသေးစိတ်: Odnoklassniki အတွက် Deposit အကောင့်
Option ကို 2: ပြည်သူ့အတန်းဖော် moderator
အဆိုပါ Oka ကျော်ရောင်းချရသောအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ, get တစ်လမ်းရှိပါတယ်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့ကလူတွေရဲ့က Moderator အတန်းဖော်ဖြစ်လာရန်လိုအပ်ပေသည်။
ပစ္စည်းကိုရှာဖွေ, လက်ဝဲကော်လံအတွက်၎င်း၏အဓိကဓါတ်ပုံကိုအောက်, browser ကို odnoklassniki.ru site ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်ကိုဖွင့် "မော် OK ကို".
အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲ "မော် OK ကို" ဂိမ်းပုံစံအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမည်သူမဆိုအကြောင်းအရာ spam များကို, ခေါ်ဆောင်သွား, လူသိများသူတစ်ဦးနှင့်ထိုးစစ်ပယ်ခြင်း, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအကဲဖြတ်ဖို့ကိုဆက်ကပ်။ တွန်းအားပေး button ကိုစတင်ရန် "Start ကိုဂိမ်း".
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နေကြသည်။ သင်ကပုံထဲမှာမပါမူမမှန်လျှင်, တစ်ဦးကို tick နှင့်အတူအစိမ်းရောင်နိမိတ်လက္ခဏာကို click, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူအနီရောင်ရမယ် "Stop" impermissible အကြောင်းအရာ၏အမှု၌။
မှန်ကန်သောအဖြေကိုအဘို့မှတ်ရယူနိုင်သော, အဲဒီနောက် button ကိုနှိပ် "လေလံ"။ အဲဒီမှာသင်တစ်ဦးကိုပုံမှန်အသုံးပြုသူ Oki ဝယ်ယူသောအမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုချိတ်ဆက်ဖို့လုံးဝအခမဲ့နိုင်ပါတယ်။
option 3: အဝန်းမော်
Odnoklassniki အတွက်အကျိုးစီးပွားအုပ်စုများထောင်ပေါင်းများစွာ၏, သူတို့သည်အစဉ်အမြဲမော်ဒလိုအပ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအလုပ်ကိုရှာဖွေလိုပါကလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ရုံဖျောပွဂိမ်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့, သင်အသိုင်းအဝိုင်းသင်တန်းသားများအတွက်ထွက်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်၏အချိန်အများကြီးယူပေမယ့်ကောင်းကောင်းသင့်အကောင့်ကိုငဲ့ကှကျ Okami ရဲ့ကို virtual အကောင့် join လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
OCI ရရှိရန်ဥပဒေနည်းလမ်းနှင့်အတူဒါကြောင့်ကျနော်တို့အတူတူအကျွမ်းတဝင်။ နိုးနိုးကြားကြားနဲ့သတိထားပါ - အင်တာနက်ပေါ်မှာထူးဆန်းလူများက swindlers ဖြစ်ပါသည်, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိ, သင်ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်တစ်ခု application ကိုပူဇော်လျှင်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်၏ရလဒ်အဖြစ်, သင်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးမည်ငွေကြေးကိုအတန်းဖော်ရဖို့ပါလိမ့်မယ်။ အခမဲ့ဒိန်ခဲတစ်ခုသာ mousetrap ၌တည်ရှိ၏။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: မိတ်ဆွေတစ်ဦး Odnoklassniki Making